T-shirt ပေါ်က စာသားကြောင့် လူစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့တဲ့ Victoria ရဲ့ဖက်ရှင်အသစ် – FemaleWear.net
David Beckham ဆိုတာနဲ့ Victoria Beckham ကိုပြေးမြင်မိသလို Victoria Beckham ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ သူမရဲ့ career တွေဖြစ်တဲ့ Spice Girls အဖွဲ့နဲ့ Designer ဘဝကို မြင်ယောင်မိကြမှာ အသေချာပါဘဲ။ သူမကတော့ အခုချိန်မှာ Spice Girls နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိတော့ပေမယ့် သူမရဲ့ Designer အလုပ်ကိုတော့ ဒီနေ့ထိ လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း သူမရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ မရှိပေမယ့် T-shirt ဒီဇိုင်းအသစ်တွေကိုတော့ ထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ T-shirt အသစ်ဒီဇိုင်းကတော့ ‘It’s A Dark But Happy Place’ ဆိုတဲ့ အရောင် ၂မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Tee လေးတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကတော့ £175 ဖြစ်ပြီး အနက် နဲ့ ခဲ ၂ရောင် တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ T-shirt တွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး အချိန်ခဏအတွင်းမှာဘဲ Victoria Beckham ရဲ့ fan တွေရဲ့ ဝယ်ယူအားပေးမှုကြောင့် sold out ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ပြီး T-shirt ပေါ်ကစာသားကြောင့် လူစိတ်ဝင်စားမှု များခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Victoria ရဲ့ ‘It’s A Dark But Happy Place’ ဆိုတဲ့ Sweatshirt လေးတွေကိုတော့ အောက်မှာဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
When you’re smiling on the inside ??? As the sweatshirt says!! Let your sweatshirt do the talking – get yours now exclusively at my website and #VBDoverSt x VB #DarkButHappyPlace
Vogue Eyewear အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Gigi Hadid